LYCÉE TECHNIQUE MAHAJANGA : Mampidi-doza ny mandalo eny amin’ny alina
Efa ela no nampiaiky ny olona ny asan-jiolahy eny amin’ny Lycée technique Ambalanomby Mahajanga. 15 septembre 2017
Vitsy amin’ny olona no mahasahy mandalo amin’io lalana manakaiky io sekoly io rehefa alina, hatramin’ny bajaj no mandà mafy mihitsy. Anisany anton’izany ny aizina amin’ny lalana manakaiky an’io sekoly io. Efa ela no tsy nisy jiro ny lalana ka miteraka ny tsy fandriam-pahalemana. Ankoatra ny sinto-mahery sy ny fanendahana dia misy koa ny fanolanana, ka tsy lahy tsy vavy samy lasibatra daholo.
Ny Bajaj no teno tsy manaiky manatitra olona mipetrakatra eny Ambalanomby raha mandalo eny amin’ny sekoly ny lalana. Ny sasany indray dia manatitra ihany fa mampiakatra ny saran-dalana indray.
Tsy ny Bajaj ihany no matahotra mankeny fa ny mpamily fiarakaretsaka hafa ihany koa, indrindra fa ny mpandeha an-tongotra. Manaitra ny tompon’andraikitra ary mba hijery akaiky an’io faritra io fa mampitaintaina ny maro.
Tsy nanameloka an’i Mamy Ravatomanga ny Fitsarana Frantsay FANOSORAM-POTAKA NATAON’NY HVM (242) 18 juillet 2019 Mbola anjakan’ny fitiavan-tena sy ny tombontsoa manokana FILOHA TEO ALOHA RAVALOMANANA MARC (169) 16 juillet 2019 Notolorana mari-boninahitra, nahazo tambin-karama mitenina 250 000 dolara EKIPAM-PIRENENA BAREA (97) 16 juillet 2019 Depiote tsy miankina 21 nanangana vondrona parlemantera iray ANTENIMIERAM-PIRENENA (85) 22 juillet 2019 Notanana am-ponja vonjimaika any Tsiafahy LEHILAHY IRAY NITORAKA POLISY (71) 19 juillet 2019 Nampiray ny Malagasy tsy vaky volo ny Barea KARDINALY TSARAHAZANA DESIRE (67) 16 juillet 2019